June 12, 2020 - Khitalin Media
June 12, 2020 Khitalin Media 0
အသက်၃၀ အရွယ်မှာ စတင်ရမယ့် အရာများ (မဖြစ်မနေ ဖတ်ကြည့် လိုက်ပါနော်) အသက် ၃၀+ ဆိုတာ ဘဝရဲ့ငါးပုံ နှစ်ပုံခန့်ကို ဖြတ်သန်းပြီးစ အရွယ်ဖြစ် ပါတယ် ။ နုပျိုမှုနဲ့ဘဝ အတွေ့အကြုံ ဉာဏ်ပညာ ရင့်ကျက်မှု သမမျှတ တဲ့ အရွယ်ပါ။ ဒီအရွယ်မှာ လိုက်နာသင့်တဲ့ […]
ဧရာဝတီတိုင်း မိန်းမလှကျွန်းပေါ်က ကမ္ဘာ့အရက်စက်ဆုံး မိကျောင်းကြီးများ အကြောင်း
မပြောချင်ပေမယ့်လည်း ပြောရဦးမယ်။ မိန်းမလှကျွန်းဒေသမှာ မိကျောင်းတွေ ရှင်သန်ကျက်စားနေခဲ့တာ ဟိုး ပဝေဏသီ ကတည်းက သူ့ သဘာဝ အတိုင်းနေခဲ့ကြတာ။ နောက်ပိုင်းမှ လူနေထူထပ်ပြီး လူတွေကရောက်လာကြတာ။ မိကျောင်းဆိုတာ မိတ်လိုက်ချိန်ရှိတယ်။ ဥဥချိန်ရှိတယ် ။ သားပေါက်ချိန်ရှိတယ်။ သက်ဆိုင်ရာ ဝန်းကျင်သားငှက်ဌာန ကလည်း ပညာပေး ဟောပြောပွဲတွေ မိတ်လိုက်ရာသီ […]
ဒါတွေဖြစ်နေရင်တော့ ကျိမ်းသေပါပြီ သင်လျှပ်စီးထိပြီး မိုးကြိုးပစ်ခံရပါတော့မယ်
နားထဲ … စီကနဲ ဝီကနဲ ခေါင်းထဲ … ကျင်ကနဲ တစ်ကိုယ်လုံး … ဖျဉ်းကနဲ အမွှေးတွေ … မတ်ကနဲ ဖြစ်သွားပြီလား ? မျက်စေ့ မြင်ရသေးရင် ၀န်းကျင် တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါ။ ဖြူကနဲ ပြာကနဲ … မြင်နေရင် အသက်ရှူရ ခက်နေရင် […]
ဆေးရုံ ရှေ့မှာ ရောင်းတဲ့ အသုပ်ဆိုင်ကိုဆေးရုံအုပ်ကြီးက သန့်ရှင်းမှု ရှိမရှိ သွားရောက် စစ်ဆေးလိုက်သောအခါ…
ဆေးရုံ ရှေ့မှာ ရောင်းတဲ့ အသုပ်ဆိုင်ကိုဆေးရုံအုပ်ကြီးက သန့်ရှင်းမှု ရှိမရှိ သွားရောက် စစ်ဆေးလိုက်သောအခါ… အသုပ် သုပ်တဲ့ အမျိုးသမီးက အသုပ်ကို နယ်တဲ့အခါ လက်အိတ် မစွပ်ပဲ နယ်တာ တွေ့တော့ ” ခင်ဗျားတို့ ဒီပုံစံ အတိုင်းသာ ဆက်ပီး ရောင်းမယ် ဆိုရင် ဒီမှာ […]
အ ရမ်းကောင်း လို့ ဖတ်စေ ချင် တယ်…. ” မသိလိုက်သော.. ပဉ္စာနန္တရိယကံ ” တကယ် ဖုတ်မဟုတ်ဘဲ မိဘအရင်း ကို ဖုတ်ထုတ်တယ် ဆိုပြီး ကိုယ်တိုင်ပဲ လုပ်သည်ဖြစ်စေ သူတစ်ပါးကိုလုပ်ခွင့် ပေးသည်ဖြစ်စေ၊ အဲဒီသားသမီး ကိုယ်တိုင်မသိလိုက်သော ပဉ္စာနန္တရိယကံကြီးထိုက် ပါ တယ် […]
တစ်ကမ္ဘာလုံး၏ အသည်းကို ကိုင်လှုပ်ခဲ့သည့်မြန်မာပြည်သားတစ်ဦး၏ အာဆီယံအဆင့် ပထမဆုရစာမူ
အာဆီယံအဆင့် ပထမဆုရ စာမူ တစ်ကမ္ဘာလုံး၏ အသည်းကို ကိုင်လှုပ်ခဲ့သည့်မြန်မာပြည်သားတစ်ဦး၏ အာဆီယံအဆင့် ပထမဆုရစာမူ တစ်ကမ္ဘာလုံး၏ ရင်ထဲအထိရှဆုံး ဘာသာ(၆)မျိုးဖြင့် ပြန်ဆိုထုတ်ဝေခြင်းခံရသည့် မိဘအပေါ် ထားရှိသည့် ဆရာ မင်းသွေးငယ်၏ အာဆီယံအဆင့် ဘဝကိုယ်တွေ့ ဖြစ်ရပ်မှန်စာပေပြိုင်ပွဲ (Genuine Experience Based Literature Contest) ပထမဆုရ […]
ပိုကျဆံခြေးထားမိလို့ ဆပျမယျ့သူက မဆပျနိုငျဘူး ကွိုကျတဲ့နရောတိုငျ လို့ပွောလာရငျ ဒီစာကိုဖတျပွီး ရဲရဲတောငျးလို့ရပါပွီ
ပိုက်ဆံချေးထားမိလို့ ဆပ်မယ့်သူက မဆပ်နိုင်ဘူး ကြိုက်တဲ့နေရာတိုင် လို့ပြောလာရင် ဒီစာကိုဖတ်ပြီး ရဲရဲတောင်းလို့ရပါပြီ မဆပ်နိုင်ဘူး ကြိုက်တဲ့နေရာတိုင် ခညားတို့ငွေတိုးချေးစားထားတာ ထောင်ထဲ ၅ နှစ်ရောက်သွားမယ်။ဒီလိုစကားတွေ ခဏခဏကြားနေရပါတယ်။ ဘယ်သူကစလိုက်တယ်မသိ။ ဒီစကားလေးက ငွေချေးသူတွေရဲ့လက်သုံးစကား လက်နက် ကြီး ဖြစ်လို့။ ဒီတော့ ငွေရှင်ခမျာလည်း အတိုးလေးရလို့ ချေးမိတာ ။ […]
ကျောက်ကပ်ဆေးနေရတဲ့သူတောင် ကောင်းသွားတဲ့ ဖလံတောင်းဝှေး
ဆီးအရောင်နီခြင်း မဲခြင်းအတွက် ဖလံတောင်ဝှေး နဲ့ထန်းလျက် ပြုတ်သောက်ခြင်း ခုအချိန် မိုးရာသီ ဖလံတောင်ဝှေး ၅၀၀ ဘိုးဆို ၃ ပင်ရောင်းသူ ၅ ပင်ရောင်းသူ နဲ့ ဝယ်လို့ရနေတဲ့အချိန်ပါ ။ အိမ်မှာ ခေါင်းတခါကိုက်ရင် ၂နာရီ ကြာပြီးရင် ဆီးအညို ကိုခက်ခဲစွာ စွန့်ထုတ်ရတဲ့ သားလေးအတွက်အဆင်ပြေတဲ့အချိန်ပါ […]
ယောက်ျားအကြိုက် အလိုလိုက်ပြီး ကလေးယူပေး၊ နှိပ်စက်ခံရရာမှ အသက်ပါပေးလိုက်ရတဲ့မိန်းကလေး
ကျွန်မသူငယ်ချင်းက နှလုံးရောဂါ ရှိတယ် ကလေးယူမရဘူးလို့ ဆရာဝန်မှာထားတယ် သူ့ယောက်ကျားက ကလေးလိုချင်တယ် ကလေးယူပေးလို့ ခနခနပြောတယ် (4.12.2019)သူကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီး ကျွန်မနဲ့ပြောပြလာတယ် ကျွန်မကမယုံဘူးမယုံဘူး နင်ငါရှေ့မာဆီးစစ်ပြဆိုပြီး သူကစစ်ပြပေးတယ် ကျွန်မကပျော်လေပျော်တယ် စိတ်လေပူတယ် သူက ကျန်းမာရေးမကောင်းဘူး ဆရာဝန်လေကလေးယူရင်အသက်အန္တရာယ်ရှိတယ်လို့မှာထားတယ် ကျွန်မစိတ်ပူနေမိတယ်ိကိုယ်ဝန်ရှိနေတဲ့အကြောင်းသူယောကျာ်းနဲ့ သူပြောပြတယ် သူယောကျာ်းပျော်မယ်လို့ထင်ထားတယ် ဘယ်ဟုတ်မလဲ ဖျက်ချဖို့ပြောလာတယ်: […]
ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်ထားတဲ့ ဘေးဒုက္ခတွေက အခုမှ စမှာတဲ့….
အခုမှ စမှာ တဲ့ ကိုဗစ်ရောဂါပိုးစတွေတော့ ကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာ ဆိုပြီးတကမ္ဘာလုံးက စိုးရိမ်ထိတ်လန့်ကြတယ် ….တကယ်လည်းကြောက်စရာကောင်းလှပါတယ်…. နိုင်ငံတိုင်းမှာ သေကြ ကျေကြတာအများကြီးပါပဲ….ရောဂါပိုးအတွက် ဆေးမရှိသေးဘူး စိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေတုန်းရှိသေးတယ် ….. အမေရိကန်ကစတဲ့ လူမျိုးရေးပဋိပက္ခဟာ တခုတကမ္ဘာလုံးကို ကူးစက်ပြန့်ပွားပြီး အခြေအနေကိုမထိမ်းနိုင်ခဲ့ရင် ကိုဗစ်ထက်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ အခြေအနေဖြစ်ဖို့ တာစူနေကြပြီ….. ကိုဗစ်အတွက်ထုတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းချက်တွေဟာ ဆန္ဒပြမူ့အောက်မှာ ပျောက်ဆုံးခဲ့ရပြီ […]